Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke III) | Site na Linux
Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke III)
Leo | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ma ugbu a, akụkụ juiciest nke nkuzi a.
1 4. Anyị na-ekepụta ọrụ anyị
2 5. Anyị na-amalite Git
3 6. Na-agbakwunye faịlụ
4 7. Creatmepụta ụdị anyị
5 8. Na-agbakwunye ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ
6 N'oge na-adịghị
4. Anyị na-ekepụta ọrụ anyị
Anyị mepụtara ndekọ nke nwere faịlụ niile metụtara ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ime ỤLỌ nke onye ọrụ anyị ka anyị mepụtara folda ahụ Ndewo Ụwa.
Anyị na-abanye na folda ọhụrụ emepụtara site na iji iwu cd.
~ $ cd Ndewo
Anyị mepụtara faịlụ nke mmemme anyịNdewo Ụwa«. Anyị nwere ike iji ederede ederede kachasị masị anyị. Ugbu a iji mee ka ihe dị mfe dị mfe ihe anyị ga-eme bụ ime iwu ndị a:
~ / HelloWorld $ echo "ebipụta (\_" Ndewo \_wa \_ ")"> helloworld.py
N'ụzọ dị otú a ọ na - eme faịlụ ahụ naanị helloworld.py n'ime nchekwa Ndewo Ụwa site na ntuziaka nke ga-ebipụta ekele ahụ.
Anyị nwere ike ịnwale usoro mmemme ọhụụ ọhụụ anyị site na nkuzi ndị a:
~ / HelloWorld $ python Helloworld.py Ndewo ~wa ~ / HelloWorld $
Ya mere, anyị kee usoro izizi nke mmemme a. Ugbu a ọ bụ ihe ịmalite Git n'ihi na ị na-elele anyị ga-eme n'ọdịnihu releases.
5. Anyị na-amalite Git
Iji malite iji Git anyị nwere ike ịhazi ụfọdụ nhọrọ izugbe, n'akwụkwọ dị na nkebi 1.5 ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a bụ nkọwa zuru ezu. Na nke a, achọrọ m igosi gị otu esi ahazi naanị nhọrọ maka nchekwa mpaghara.
Ndị a nhọrọ m na-akọwapụta na aha njirimara m maka ọrụ a bụ «lecovi«, Na email m maka oru ngo a bụ«colomboleandro@bitson.com.ar»Na na ndabara nchịkọta akụkọ m chọrọ iji mgbe m na-agba ọsọ eme bụ wd.
Iji nweta Git na sistemụ anyị ka anyị ga-etinye git ngwugwu arụnyere.
Uru nke iji Git bụ na ọ na-agba ọsọ na mpaghara na ndekọ ọrụ nke ọrụ anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji ebido ya na ndekọ aha ọrụ na iwu ahụ init.
~ / HelloWorld $ git init Initiative efu nchekwa ọdụ na /home/leo/HolaWorld/.git/ ~ / HelloWorld $
Ugbu a, anyị ga-eke faịlụ ahụ .gitigo gịnị ka ị ga-agwa ya Git kedu faịlụ na akwụkwọ ndekọ aha ị gaghị eso. Maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịkpọ ndị akwukwo. Na nke a anyị ga-agwa gị ka ị leghara otu faịlụ ahụ anya .gitigo na faịlụ niile na-agwụ na .pyc.
~ / HelloWorld $ ikwughachi .gitignore >> .gitignore ~ ​​/ HelloWorld $ ikwughachi * .pyc >> .gitignore
6. Na-agbakwunye faịlụ
Ugbu a, anyị ga-agbakwunye faịlụ (na nke a naanị anyị nwere otu faịlụ helloworld.py, ma echere m na ị nwetara echiche ahụ, nri?). Iji iwu tinye anyị ga-agwa ya tinye ihe niile dị na ndekọ ahụ (belụsọ ihe anyị dere na faịlị ahụ .gitigo).
~ / HelloWorld $ git tinye.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ebe a anyị ejirila. (oge) iji gwa ya ka ị gbakwunye ọdịnaya niile, anyị nwere ike ịmela ndepụta dị iche nke faịlụ na ndekọ aha anyị chọrọ itinye. Ma ọ bụ mechie iwu ahụ nke ọma tinye tinye.
7. Creatmepụta ụdị anyị
Ozugbo anyị ahazi Git ma gbakwunye faịlụ niile anyị chọrọ ịchịkwa site na sistemụ njikwa sistemụ anyị, anyị ga-eme nke ama eme.
Site na ntuziaka a, anyị ga-edobe otu isi na akụkọ ntolite anyị. Maka ikpe mbu ọ bụ ihe a na-emekarị eme na nkọwa «Mbido ime«. Ana m ahapụkarị steeti bidochara na m na-agba ọsọ iwu ahụ eme na nhọrọ -a.
~ / HelloWorld $ git ime -a
Nke a ga-emepe nchịkọta akụkọ nke anyị setịpụrụ na ndabara, n'ọnọdụ m wd, na anyị nwere ike ide nkọwa nke eme. N’okwu a, aga m ede ihe ndị ae kwuru n’elu. Ozugbo anyị chebere faịlụ ahụ na onye editọ, Git ga-ahụ maka ime nke a eme.
8. Na-agbakwunye ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ
Ugbu a bụ oge ịgwa anyị Git mpaghara nke nwere ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ. Na akwukwo Anyị akọwaala usoro iji mepụta nchekwa na GitHub. N'akụkụ a, anyị ga-eji ihe anyị hapụrụ na-echere na ngalaba nke 3 nke post gara aga.
Iji gbakwunye ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ anyị ga-eji iwu ahụ git remote tinye ebe a na-enyefe aha ma ọ bụ utu aha na ebe nchekwa na URL ya dị ka esemokwu. Na nke a, anyị ga-eji otu sitere na ọrụ ị mepụtara Koodu Google.
Nwere ike mepụta ọrụ nke gị ma jiri ya n'otu ụzọ ahụ.
~ / HelloWorld $ git remote tinye gc https://code.google.com/p/lecovi-hello-world/
Ugbu a, n'ikpeazụ bulite ebe nchekwa anyị dị na mpaghara nke dịpụrụ adịpụ anyị na-eme iwu ahụ Kwaa.
~ / HelloWorld $ git push gc nna ukwu
Dị ka akụkụ nke 3 anyị kere faịlụ ahụ .netrc ọ ga-eji akụkụ ndị echekwara na faịlụ ahụ jikọọ na sava ahụ. Alaka ga-ebili nwe- ka repository na anyị na-azọpụta dị ka gc.
Na peeji nke ọrụ anyị Koodu Google, anyị pụrụ ịhụ na ngalaba Source na ngalaba Chọgharịa ọdịnaya nke ọrụ anyị.
Ruo ugbu a, anyị agwụla nkuzi banyere otu esi amalite ọrụ Git y Koodu Google.
Na nke na-esote ikpeazu nke obere nkuzi a anyị ga-enyocha etu esi eme mgbanwe na ọrụ anyị yana na ha gosipụtara na sistemụ njikwa ụdị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke III)
gini mere i jiri tinye .gitignore faịlụ na .gitignore?
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya: P, faịlụ ahụ kwesịkwara ịga repository.
I kwuru eziokwu, ọ baghị uru ime ya. Ọ bụ naanị dị ka ihe atụ iji hụ otú o si arụ ọrụ ma bụrụ ihe atụ. Ọ bụ na etinyeghị m ọtụtụ faịlụ ma chọghị ime ka ọ sie ike!
Daalụ maka nkọwa gị.
Ezigbo usoro! Ekelere m gị!
Great Pablo, nnukwu obi ụtọ isonye!
Gyazo, mmemme iji weghara ihuenyo ma jiri ya dobe ya na ntanetị
Ngosipụta ngosi na Gentoo na Brightside na Skippy